Momba anay - WUHU XINLONG PLASTIC PRODUCT CO., LTD
WuHu XinLong Plastic Products Co., Ltd. natsangana tamin'ny taona 2020, an'ny Wuhu WEITOL Automation Equipment Co., Ltd. Any amin'ny faritry ny fampandrosoana ara-toekarena XinWu ao amin'ny tanànan'i Wuhu, Faritanin'i Anhui. Mirefy 8000 metatra toradroa mahery ny velarany ary misy mpiasa 50 eo ho eo. Famokarana plastika matihanina io. Manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana sy ny famokarana fitoeran-tsakafo PP azo ampiasaina izahay.
Mifantoha amin'ny R&D sy ny famokarana boaty sakafo fifadian-kanina, boaty sakafo haingana azo alefa, ambongadiny fihinan-kanina haingana, kitapom-batsy, kojakojam-panaka azo alaina, latabatra fiarovana ny tontolo iainana, ambongadiny misy latabatra, alao ny boaty sakafo haingana, ambongadiny haingana. Ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny fiainana. Anisan'izany ny boaty fitehirizana trano, kojakojan-dakozia, kojakoja fandraisam-bahiny, kojakoja fisakafoanana ary fonosana fitaovana hafa.
Amin'ny alàlan'ny ezaka tsy manam-paharoa dia manana karazana boaty fisakafoanana plastika mihoatra ny 260 isika, boaty voankazo plastika, antsy plastika, fork ary sotro misy karazany sy fika manokana. Mandritra izany fotoana izany dia tsy nitsahatra ny fampandrosoana ny vokatra vaovao. Manome serivisy manokana ho an'ny mpanjifa ihany koa izahay ho an'ny famolavolana ny vokatray (ao anatin'izany ny sary famantarana, pirinty loko, ny fanaingoana ny lokon'ny vokatra, sns.). Ary manana ihany koa ny kojakojam-pandrefesana sy ny atrik'asa fisakafoanana pulp an-tsokosoko, ankoatry ny vokatra Blister mahazatra sy boaty fisakafoanana pulp, dia afaka manaiky ny fanaingoana ny vokatra, ny fanaingoana ny loko, ny fanaingoana ny bobongolo ary ny fitakiana hafa.
Ho anay dia ny fanaraha-maso kalitao dia fihetsika kokoa noho ny teny filamatra. Ny fifehezana kalitao henjana dia ampiharina amin'ny lafiny rehetra amin'ny asa mba hahatratrarana ny fenitra avo lenta ho an'ny mpanjifa ambony. Io filozofia io dia nanenika ny ambaratonga rehetra amin'ny fizotry ny famokarana, mandrakotra ny: (1) Fanaraha-maso ara-pitaovana (2) Fanaraha-maso ny asa-in-mandroso (3) Fanaraha-maso ny vokatra vita (4) Fanaraha-maso ny trano fitehirizana tsy misy fangaron'ny asa mafy ataon'ireo ekipanay, izahay namolavola vokatra manokana sy mifaninana maro ho an'ny tsenanay anatiny ary mahazo valiny tsara ihany koa. amin'ny maha ekipa tanora antsika dia manana fahaiza-manao marketing matanjaka koa izahay, koa manapaha hevitra amin'ny departemantan'ny varotra manara-maso, manitatra ny faritra fivarotana, serivisy ho an'ny mpanjifa manerantany.
Miaraka amin'ny karazany maro, kalitao tsara, vidiny mirary ary volavola azo ampiharina, ny vokatray dia eken'ny besinimaro sy atokisan'ny mpanjifanay, miaraka amin'ny 'Integrity. Kalitao. Filozofia momba ny fandrosoana sy ny fampandrosoana ', dia raisinay tsara ireo mpanjifa vaovao sy taloha avy amin'ny rindrin'ny fiainana rehetra mba hifandray aminay amin'ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy sy ny fahombiazan'ny fiaraha-miasa!
Haben'ny tonga lafatra sy fampiasana tanteraka
Xinlong prep prep fitoeran-25OZ ho an'ny sakafo lehibe indrindra, salady sy tsindrin-tsakafo ary mankafy ny sakafo any amin'izay toerana rehetra, tsy manahirana. Ny fitoeram-panomanana sakafo rehetra dia afaka mitahiry 25oz. Tsy misy plastika mitsonika ao anaty lasanao, miady amin'ny mikraoba, na mamaky vata fampangatsiahana. Ny kaonteneranay matanjaka dia mahazaka hatramin'ny -14F ka hatramin'ny 230F (-10C - 110C).
Freezable, microwave azo antoka & mahatohitra tondra-drano
Namboarina tamin'ny fitaovana azo antoka sakafo avo lenta indrindra, ny vata fampangatsiahana ary ny fonosana fitahirizana sakafo tsy misy mikraoba dia manana fananganana matanjaka sy mafy ary rakotra fohy mba hahazoana antoka fa mijanona ao anaty fitoeram-plastika ny sakafonao.
Azo ampiasaina indray na azo ampiasaina
Amin'ity kaontenera fanomanana sakafo ity dia afaka mankafy sakafo ara-pahasalamana sy an-trano foana ianao na aiza na aiza. Manamboara salady vaovao, voankazo, karaoty, na tsakitsaky maina ato amin'ity boaty bento farany / fitoeran-tsakafo ho an'ny olon-dehibe na ankizy ity; tonga lafatra amin'ny asa na any an-tsekoly, ataovy ao anaty kitapo fisakafoanana, kitapo, kitapo gym na poketra misy anao.
Misaotra ny endrik'izy ireo azo ampirimina, mitahiry habaka, ireo boatin-kaontenera ireo dia mifamatotra mba hitahirizana mora sy mora!
Kaontenera fitehirizana sakafo marobe
Ny hevitra mampieritreritra dia mahatonga ireo fitoeram-panomanana sakafo plastika azo ampiasaina azo ampiasaina amin'ny fampiasana isan-karazany, ao anatin'izany ny fisotroana trano fisakafoanana sy trano fisotroana, boaty bento ho an'ny asa, mpanangona sakafo, ary atolotry ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana amin'ny fikarakarana sakafo, ny fifehezana ny ampahany. Matanjaka ihany koa izy ireo amin'ny FITONDRANA NY FITAOVANA TSY MISY Sakafo, toy ny fitaovan'ny birao, fitaovana ary na inona na inona anananao.